Wasaarada Caafimaadka Ee DFI: Kahortaga Iyo Xakamaynta Virus-ka EBOLA Ayaa Loo Tababaray 200 Oo Xirfadlayaal Caafimaad Ah. - Cakaara News
Wasaarada Caafimaadka Ee DFI: Kahortaga Iyo Xakamaynta Virus-ka EBOLA Ayaa Loo Tababaray 200 Oo Xirfadlayaal Caafimaad Ah.
Adhis Ababa(CN) Isniin-11-Aug-2014, Wasaarada Caafimaadka ee Dawlada Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ayaa sheegatay in latababaray 200 oo xirfadlayaal caafimaad ah sidii looga hortagi lahaa loona xakamayn lahaa Virus-ka EBOLA ee dhawaanta ka dilaacay qaar kamida wadamada Galbeedka Afrika.
Madaxa xidhiidhka dadwaynaha ee wasaarada caafimaadka DFI mudane Axmed Imaano ayaa sheegay in wadamada kala duwani ay ku dadaalayaan talaabooyinka kahortagaya fiditaanka Virus-ka EBOLA ee kasocda Galbeedka Afrika. Wasaaradu waxay sheegtay in dalka Itoobiya uusan kajirin Virus-ka EBOLA balse wasaaradu ay diyaarisay talaabooyin kahortag ah maadaama uu cudurkani yahay mid faaafa.
Warkan oo aan kasoo xiganay wakaalada wararka ee Itoobiya (ENA) ayaa sheegaya in wakhti xaadirkan ay wasaaradu tababartay 200 oo xirfadlayaal caafimaad ah kuwaas oo lagasoo kala xulay haayadaha caafimaadka ee dawliga iyo kuwa gaarka loo leeyahay. Tababarkan oo socday mudo 15 cisho ah ayaa si buuxda xirfadlayaasha loo baray nidaamka kahortaga faafida iyo xakamaynta Virus-ka EBOLA. Sidoo kale wasaarada caafimaadku waxay diyaarisay haayadaha caafimaadka iyo qalabyada loo isticmaalayo ka hortaga iyo xakamaynta cudurkaasi.
Dhinaca kale waxay wasaaradu lakaashatay kahorataga Virus-kan shirkada diyaaradaha Itoobiya iyo dhamaan haayadaha la xidhiidha si loo ilaaliyo safarada soogalootiga ah ee looga cabsi qabo faafka Virus-ka Ebola. Waxayna wasaaradu bulshawaynta ku wacyi galinaysaa in digtooni hore laga yeesho dhamaan siyaabaha uu ku fidayo virus-ka EBOLA haday tahay dadka iyo haday tahay duunyadaba. Waxayna sheegatay in hadii qofku taabto qof qaba Virus-ka EBOLA uu isku arkayo calaamadaha cudurka mudo dhan 2 ilaa 21 cisho gudahood.
Sida ay sheegayso warbixinta Haayada Caafimaadka Aduunka(WHO) cudurkan EBOLA ee dhawaanta kadilaacay Galbeedka Afrika ayaa wuxuu dilay kudhawaad 1 kun oo qof iyadoo ay virus-kana qaadeen in kabadan 1 kun iyo 3 boqol oo qof.